Waa Imisa lacagaha ka timid beesha caalamka oo ay DF Somaliya u fasaxday maamul goboleedyada dalka? +Ujeedka | HalQaran.com
Waa Imisa lacagaha ka timid beesha caalamka oo ay DF Somaliya u fasaxday maamul goboleedyada dalka? +Ujeedka
Muqdisho (Halqaran.com) – Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay inay fasaxday lacago deeq ah oo ka mid ah deeqaha Beesha caalamka ay ugu talo galeen Soomaaliya, kuwaasi oo loo fasaxay qoondadii ay ku lahaayeen Maamul Goboledyada dalka ka jira.
Warqad qoraal ah oo ka soo baxday Xafiiska Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Somaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Somaliya ay fasaxday lacagtaasi, islamarkaana Maamul Goboled kasta loo fasaxay hal milyan oo doolar.
Sidoo kale, qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in Maamul goboleedyada iyo Gobolka Banaadir laga doonayo in lacagtaan Halka Milyan ah ay inta ugu badan ee ama laba meelood ay u isticmaalaan dhinaca Amniga iyo Arrimaha Bulshada inta soo hartana Go’aankeeda ay iyaga leeyihiin.
Maamul goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ayaa loogu baaqay inay soo gudbiyaan warqad codsi ah oo ku aadan sida loo isticmaalayo lacagta loogu deeqay, isla markaana ay heystaan mudo 45 Cisho ah.
Ugu dambeyn, maamul Goboledyada lacagta loo fasaxay waxaa qayb ka ah Maamulka Jubbaland oo dowladda Soomaaliya ay kala dhaxeysa xaalad adag oo siyaasadeed, islamarkaana xiriirkooda uu yahay mid aanan wanaagsaneyn.
lacago ka timid beesha caalamka
u fasaxday maamul goboleedyada